घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू जोन लुन्डस्ट्रम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जोन लुन्डस्ट्रमको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो फुटबल जीनियसको संक्षिप्त इतिहास हो जुन उपनाम "लुनी" को नामले परिचित छ। हामी उनको शुरुवाती दिनहरु बाट शुरू, उहाँ प्रसिद्ध हुँदा। तपाइँलाई जोन लुन्डस्ट्रमको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको मार्गचित्रको ग्यालरी छ।
प्रारम्भिक जीवन र जोन लुन्डस्ट्रमको उदय।
हो, सबैलाई थाँहा हुन्छ कि ऊ अंग्रेजी फुटबटमा कोही पनि थिएनसबै बन्न को उसको इलेक्ट्रिक शेफील्ड युनाइटेड टीमको मुटुको धडकन जसले २०१२/२०१० प्रिमियर लिग सीजनको राम्रो सुरुवात गरेको थियो। यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले जोन लुन्डस्ट्रमको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोन लुन्डस्ट्रम बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ जोन डेविड लुन्डस्ट्रमको पूरा नामहरू राख्नुहुन्छ। उहाँ फेब्रुअरी १ ​​th 18 day मा युनाइटेड किंगडमको लिभरपूल सहरमा आफ्ना बाबुआमाको जन्म भएको थियो। उत्तर पश्चिमी इ ;्ल्यान्डका अ man्ग्रेजी मानिस दोस्रो बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए आफ्ना प्यारा आमा बुवाका लागि जो तल चित्रण गरिएको छ;
जोन लुन्डस्ट्रमका अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्।
जोन लुन्डस्ट्रम एक मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिका हुन् जसले उनका बुवाले संचालन गरेका थिए जसले लिभरपुल शहरबाट आफ्नो दैनिक रोटी कमाए। जोन लुन्डस्ट्रमको परिवार महान शहर [लिभरपूल] बाट आएको हो, जुन विश्वको पहिलो यात्री रेलवे लाइनका लागि प्रसिद्ध छ (सन् १ 1830० मा बनेको) र गिनीज बुक अफ रेकर्ड्स शीर्षकले यसलाई अंग्रेजी क्याप्ट अफ पप भएकोमा मान्यता दिएको छ।
जोन लुन्डस्ट्रम आफ्ना आमाबुबासँगै एक्लै हुर्किएनन् तर उनको सेलिब्रिटी ठूली बहिनी जोडी लुन्डस्ट्रम (years वर्ष उसको जेष्ठ) संग। तपाईंलाई थाँहा थियो?… Jodie Lundstram को लागी एक लोकप्रिय अभिनेत्री थियो ब्रिटिश टेलिभिजन श्रृंखला 'हानिकारक Scousewives'।
जोन लुन्डस्ट्रम शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
उहाँको पहिलो शिक्षा- रातो / निलो प्रश्नको उत्तर दिँदै: It तपाईको परिवारको जरा भने पनी फरक पर्दैन लिभरपूल सहर। चाहे तपाईं बाहिरी व्यक्ति हुनुहुन्छ वा इन्डीजिन, जहाँसम्म तपाईंको खुट्टा शहरको मैदानमा छ, तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिनेछ जुन सबै हो- के तपाईं रातो हुनुहुन्छ [लिभरपूल] or निलो [Everton] ?.
एक बच्चाको रूपमा पहिलो शिक्षा लुन्डस्ट्रमले प्रश्नको उत्तर दिने थियो।
प्रश्नको जवाफ दिँदा तपाईले प्रार्थनाको उत्तर दिनुपर्दछ कि तपाईले सहि उत्तर दिनुहोस्। यसको मतलव ट्रानमेरे रोभर्स जस्तो तटस्थ क्लब छनौट गर्नु भनेको होइन। जोन लुन्डस्ट्रमको लागि उत्तर थियो रातो [लिभरपूल], एक छनौट जुन उनको अ family्ग्रेजी क्लबलाई समर्थन गर्ने धेरैजसो परिवारका सदस्यहरूसँग थियो।
एक फुटबल प्रशंसक भएको र खेल अवधि पछि कहिलेकाँही खेल खेल्ने, सानो Lundstram थाहा थियो कि उनीसँग फुटबल क्यारियरको साथ आफ्नो नाम कमाउने प्रतिभा छ। प्रारम्भमा, कडा र घट्दो अंग्रेजी मानिस आफ्नो व्यापार सिक्न थाले स्थानीय पिचहरूमा मिडफिल्डर।
रेडहरूलाई समर्थन गर्ने धेरै महत्वाकांक्षी बच्चाहरू जस्तै, लुन्डस्ट्रमले आफ्नो प्यारो क्लब, लिभरपूलमा सम्मिलित हुने सबै माध्यमहरू खोजे। यद्यपि अवसरको अभावले उसको प्रगतिलाई रोक्न दियो जब क्लबले यो ट्रायलको लागि बोलायो। अगाडि बढ्दै, उसले आफ्नो छिमेकीहरू र प्रतिद्वन्द्वी, एभर्टनमा स्विच गर्‍यो जसले उसलाई ट्रेल्सको लागि आमन्त्रित गर्‍यो।
जोन लुन्डस्ट्रम प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
एक सफल परीक्षणले वर्ष 2002 मा जोन लुन्डस्ट्रमले एभर्टन एकेडेमी सेटअपमा भर्ना हुन पाए जुन उनको क्यारियरको जग बसाल्न मञ्च प्रदान गर्‍यो। मर्सीसाइड क्लबमा सम्मिलित भएपछि, सुरुमा सबै रमाईलो थियो। तर सानो जोन आफ्नो क्यारियर को नाम मा धेरै त्याग गर्नु पर्यो। उदाहरण को लागी, tयहाँ धेरै पटक उसले महत्त्वपूर्ण जन्मदिनको पार्टीहरू, पारिवारिक सामाजिकहरू र चीजहरू जुन उसले स्कूलमा खोजिरहेको थियो छुटेको थियो। तर फ्लिप साइड मा, सानो लुनी (तल चित्रमा) वास्तवमा उसले गरिरहेको काम गरिरहेको थियो- उनको कामलाई आफ्नो काम बनाउँदै.
एकेडेमी फुटबलको साथ जोन लुन्डस्ट्रम अर्ली लाइफ।
एन्ड्टोनियन एकेडेमीको पदयात्रामा लुन्डस्ट्रमले ठूलो प्रतिज्ञाहरू देखाए। उसको परिवारको उत्पत्ति मर्सीसाइडबाट भएको (लिभरपूलको इन्डिजिन भएको), उनी एको हकदार भए ठ्याक्कै जुलाई 2010 वरिपरि पूर्ण-समय छात्रवृत्ति।
दुई बर्ष पछि एकेडेमी स्तरहरु मार्फत आफ्नो बाटो मा काम, Lundstram एभर्टन वरिष्ठ पक्ष मा उत्थान भयो र संगै धेरै आशावादी र विश्वास थियो संग संग डेभिड मोयेस.
हो! एभर्टनका वरिष्ठ व्यवस्थापकलाई एभर्टन वरिष्ठ टीममा युवा खेलाडीहरूको ग्यारेन्टी गर्ने उनको भूमिकाको लागि यति मनपर्‍यो कि लुन्डस्ट्रम त्यस समयमा उनको मनपर्नेहरू मध्ये एक थिए। तर तथापि, Lunny थोरै थाहा थियो डर्क टिमहरू उसको बाटो आउँदै थियो।
जोन लुन्डस्ट्रम जीवनी - फेम स्टोरीको कठिन मार्ग:
डेभिड मोयसको हार्ट ब्रेक: मे 2013 मा, निम्न एलेक्स फर्ग्युसनको म्यानचेस्टर युनाइटेड, Moyes एभर्टनले उनी सफल हुन क्लब छोड्ने कुरा बताए फर्गुसन। यो खबर, यो उत्साहित जबकि डेभिड मोयेस, लुन्डस्ट्रमको लागि राम्रो थिएन जो दुःखी भयो कि एभर्टन प्रबन्धक र क्लबका सम्पूर्ण कोचिंग स्टाफको साथमा म्यान युनाइटेडको साथ सबै हरिया घाँसहरू हेर्दै थिए।
के बारे मा Lundstram सोचे वास्तविकता भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… डेभिड मोयेस रोबर्टो मार्टिनेजद्वारा प्रतिस्थापित गरियो जसले आफ्नो विगन एथलेटिक ब्याकरूम स्टाफका चार सदस्य (अनौंठो अनुहार) लाई एभर्टनमा ल्याए।
लुन्डस्ट्रमले सदस्य देखेको देखेर मुटु छिन्यो डेभिड मोयेस'एभर्टन ब्याकरूम स्टाफ उसलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि पछ्याउँदै। यो पछि रोबर्टो मार्टिनेजले आफ्नो नयाँ एभर्टन टीममा नयाँ खेलाडीहरू हस्ताक्षर गरे, जसको निर्णयले गरीब लुन्डस्ट्रम बनायो (तल चित्रित) डर र आफ्नो भविष्यको बारेमा धेरै प्रतिबिम्बित।
गरीब जोन लुन्डस्ट्रमले आफ्नो भविष्यका बारे एभर्टनका साथ परावर्तन गर्दै।
आफ्नो loanणको भुक्तानी गर्न बाहिर गए पनि, लुन्डस्ट्रम अझै पनि आफ्नो स्थानको लागि लड्न कोशिस गर्दा आफ्नो अधिक समय खर्च गर्नु बेकारको छैन किनकि उनी रोबर्टो मार्टिनेजले जानाजानी किनारेका थिए। उसको पीडादायी शब्दहरूमा;
"कहिले डेभिड मोयेस एभर्टनमा थियो, म उनको टोलीमा थिए र पहिलो टीमले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको थियो तर उसले क्लब छोड्ने बित्तिकै यो मेरो लागि समान थिएन। म मार्टिनेजको नेतृत्वमा पहिलो टोलीमा संलग्न भएकी थिइनँ। त्यसले मेरो आत्मविश्वास ढकढक्यायो, मलाई फिर्ता ल्यायो र मेरो विकासलाई असर गर्यो। "
तपाईंलाई थाँहा थियो?… आफ्नो होमल्याण्ड क्लब (एभर्टन) सँग एक .तुको एक सपना देखिसकेपछि, गरीब लुन्डस्ट्रम क्लब द्वारा रिहा भयो। वास्तवमा, aएनवाई एकेडेमी स्नातक र युवा फुटबलर जो एक क्लब द्वारा जारी गरिएको माध्यम बाट बाँचिरहेका छन् केवल केवल गहिरो भावनात्मक पीडा र यसले हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणामहरू भोग्न सक्दछन्। जोन लुन्डस्ट्रमका अभिभावक, परिवारका सदस्यहरू र नजिकका साथीहरू (उनका एभर्टन टोलीका साथीहरू सहित) यी कठिन समयमा उहाँसँगै उभिए।
जोन लुन्डस्ट्रम जीवनी - ख्याति कथामा उदय:
मा सारियो: एभर्टनले छोडे पछि, लुन्डस्ट्रमले आफ्ना आमाबुबा र परिवारसँग पहिलो पहिलो टीम फुटबल प्राप्त गर्न अंग्रेजी फुटबलको एकदम कम स्तरमा जान सहमत गरे। निर्णयको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने;
“यो मैले गरेको सब भन्दा राम्रो निर्णय थियो। मेरो पहिलो लक्ष्य सुरुमा च्याम्पियनशिपमा फिर्ता जान प्रयास गर्नु थियो, र त्यसपछि मेरो लायक प्रमाणित गर्न प्रिमियर लिगमा पुग्नु ”
जुलाई २०१ 2017 मा भर्खरै प्रमोट गरिएको चैम्पियनशिप साइड-शेफिल्ड युनाइटेडमा सामेल हुनु अघि लुन्डस्ट्रमको यात्रा लीग टु साइड अक्सफोर्ड युनाइटेडसँग शुरू भयो। उनको सानो योगदानको साथ उनले क्लबलाई एक दशक पछि फिर्ता (प्रिमियर लिग) मा पदोन्नती गर्न सहयोग गरे। अनुपस्थिति
शेफिल्ड युनाइटेड फ्यानहरू गलत प्रमाणित गर्दै: एक खेलाडी र प्रबन्धक बीचको सम्बन्ध अक्सर सफलता वा समस्याको थुप्रो बीचको भिन्नता हुन सक्दछ। शेफील्ड युनाइटेड प्रबन्धक क्रिस वाल्डरले २०१//२०१० सिजन भन्दा पहिले जोन लुन्डस्ट्रमसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरे। उनले अगाडि सार्वजनिक गरे कि लुन्डस्ट्रम नयाँ २०१ ./२०२० सत्रमा उनको मुख्य व्यक्ति हुनेछन, यो निर्णयले शेफिल्ड प्रशंसकहरुबाट चर्को बडबड उडायो किनकि उनीहरुलाई थाहा थियो कि उनी प्रतियोगिताको सीमित पदोन्नतिको समयमा मुश्किलले खेलेको थियो।
लुन्डस्ट्रम ड्रप गर्न ठूलो दबाबको बाबजुद, शेफिल्डका प्रबन्धक क्रिस वाइल्डरले उनको महत्वाकांक्षी शेफील्ड युनाइटेड पक्षको सौन्दर्यलाई समेट्नका लागि मुख्य व्यक्ति हुन प्रस्ताव गर्दै फ्यानको चाहनाको बिरूद्ध गए। लुन्डस्ट्रमले क्लबको आश्चर्यजनक २०१ ./२०२० प्रीमियर लिग सुरुवातमा उनका उल्का वृद्धिलाई प्राप्त गर्न सबै विचित्रताहरूलाई अस्वीकार गरे पछि यो निर्णय अन्ततः समाप्त भयो।
क्रिस वाइल्डर शेफिल युनाइटेड प्रशंसकहरूको बिरूद्ध गए जोन लुन्डस्ट्रमलाई उनको जीवनको अवसर दिए।
जोन लुन्डस्ट्रमको लागी दुई मिशन र पोइन्टहरू प्रमाणित गर्नका लागि थिए। पहिलो शेफील्ड युनाइटेड प्रशंसकहरू (जुन उसले गरेको थियो) लाई प्रमाणित गर्ने थियो र दोस्रो एभर्टनको बिरूद्ध बदला लिनु थियो, जसले आफ्नो पक्षले उनीहरूलाई पहिलो भेटमा (सेप्टेम्बर २१, २०१ 21) हरायो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै थियो।
स्वेट रेभेंज: सबैभन्दा ठूलो अभियान अन्तमा सेप्टेम्बर 21 को 2019st दिनमा आयो जब शेफील्ड एभर्टनको बिरूद्ध आफ्नो खेलको लागि बाहिर निस्के। केही एभर्टन फ्यानहरूका लागि प्रतिद्वन्द्वी खेलाडी राम्रोसँग खेल्छन् वा उनीहरूको बिरूद्ध स्कोर गर्दछन् जुन खेलको अंश र पार्सल हो. तर जोन लुन्डस्ट्रम हेर्दै (पहिले जो उनीहरूसँग खेलेको थियो) उनीहरूको (0-2) पराजयमा मुख्य मानिस भएकोले दुबै प्रशंसकहरू र खेलाडीहरूलाई विकृत बनायो।
जोन लुन्डस्ट्रमले आफ्नो पक्ष एभर्टनलाई हराएको कुरा सुनिश्चित गर्‍यो, क्लबले एकपटक उनीमा विश्वासको कमी देखायो। यो उनले भनेका थिए त्यो भावनात्मक खेल पछि रेडियो शेफिल्ड (क्रेडिट शेफील्ड युनाइटेड यूट्यूब च्यानल).
लेखनको समयसम्म, जोन लुन्डस्ट्रम loanण टेलरबाट गइसकेका छन्, यस विजेता शेफील्ड युनाइटेड टोलीको मुटुको धडकन बन्न पुग्न कम्तिमा एउटा सुगन्ध पाइरहेका छन्, जसले उनलाई आफ्नो पुस्ताको सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डर्स मध्ये एक बनायो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
जोन लुन्डस्ट्रम - प्रेमिका, पत्नी, बच्चा?
उनको प्रख्यात meteoric वृद्धि संग, यो निश्चित छ कि ज्यान लुन्डस्ट्रमको एक प्रेमिका वा पत्नी छ कि धेरै फुटबल प्रशंसकहरु लाई सोधपुछ गर्नु पर्छ। हो, tयहाँ कुनै आफ्नो सुन्दर देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन, प्यारो मुस्कान संग मायालु गुणहरु संग उहाँलाई एक मानिस को लागी हरेक सम्भावित प्रेमिका इच्छा सूची को शीर्ष मा हुन छैन।
फ्यानहरूले प्रश्नहरू सोधेका छन् जो जोन लुन्डस्ट्रमको प्रेमिका को हुन सक्छ।
लेख्ने समयमा जस्तो देखिन्छ कि जोन लुन्डस्ट्रमले आफ्नो प्रेमिका वा पत्नीलाई प्रकट नगर्न सचेत प्रयास गरेका छन (त्यो यदि ऊ पहिले नै गोप्य विवाहमा छ भने)। यद्यपि, प्रिमियर लिगको माफी नपाईएको प्रकृतिलाई सम्बन्ध बनाउने सम्बन्धलाई सार्वजनिक बनाउने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो हुन सक्छ कि लुन्डस्ट्रम एक्लो छ, जसले एक वैगको अस्तित्वलाई जनाउँदछ।
जोन लुन्डस्ट्रम व्यक्तिगत जीवन:
जोन लुन्डस्ट्रमको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई खेलको पिचबाट उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरु गरेर, उहाँ एक धेरै मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्छ र फुटबल देखि टाढा, तपाईं सजिलैसँग धेरै व्यक्तिहरूको कम्पनीमा पाउन सक्नुहुन्छ।
जोन लुन्डस्ट्रम व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्न।
तलको फोटोबाट हेरोद, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि जोन लुन्डस्ट्रमको जीवनको सहज ज्ञान छ। उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई छोडिदिई अन्य प्राणीहरूसँग उत्तम भावनात्मक सम्बन्ध प्राप्त गर्न सकिन्छ क्यारियर अहंकार र उसको साथीहरुको आवश्यकताहरु उसको अगाडि राख्नुहुन्छ। बदलामा केहि पनि आशा नगरी उसले यो गर्छ।
जोन लुन्डस्ट्रम पारिवारिक जीवन:
जोन लुन्डस्ट्रम फुटबलको सट्टा अन्य प्रतिभाले भरिएको लिभरपूल परिवारबाट आएका हुन्। आफ्नो क्यारियर को सफलता र उनको बहिनी बाट छ वित्तीय स्वतन्त्रता तिर आफ्नो परिवारको भाग जाली। लुन्डस्ट्रमको जेठी बहिनी, जोडी लुन्डस्ट्रम (तल चित्रमा) एक पेशेवर अभिनेत्री हुन् जसले ब्रिटिश रियलिटी शो हताश स्कूजवाइभको लागि उनको भूमिकामा सफलता देख्छिन्।
जोन लुन्डस्ट्रमको बहिनी- जोडी लुन्डस्ट्रम।
वर्तमानमा, जोडी लुन्डस्ट्रम लिभरपूलमा एक ठूलो समय उद्यमी हो। उनी लिभरपूलमा लोकप्रिय ल्याश बीच ब्रिटेन र एस्थेटिक्स (एक मेडिकल स्पा) को संस्थापक हुन्।
जोन लुन्डस्ट्रमकोलागि सेलिब्रिटीको दर्जा प्राप्त गर्न आफ्नो परिवारको दोस्रो सदस्य बन्नेले आफ्ना आमाबुबाको जीवनमा अर्थ र उद्देश्यको गहिरो भावना सिर्जना गरेको छ। जस्तो जोडी लुन्डस्ट्रमले उनको इन्स्टाग्राम पृष्ठमा औंल्याए, टीवारिस गर्व आमा र बुबाले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खुशीको दिन देख्यो जब उनीहरू पहिलो पटक प्रिमियर लिगमा बच्चा खेलिरहेका थिए। तल चित्रण गरिएको, आमा र बुबा दुबै जोन लुन्डस्ट्रमको क्षमता बढाउन र प्रोत्साहित गर्न उनीहरूको बुवाको क्षमता प्रयोग गरेकोमा गर्व गर्दछन्।
जोन लुन्डस्ट्रम उनीहरूको छोरोले प्रिमियर लिग चराएको देखेपछि जीवनको मजा लिइरहेका छन्।
परिवारका अन्य सदस्यहरू: जोन लुन्डस्ट्रमको परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग भेट गर्नुहोस् जब उनीहरू लुन्डस्ट्रम घरको आमाको साथ फोटोको लागि पोष्ट गर्छन्। देखेझैं, जोन लुन्डस्ट्रम परिवार एक नजिकको इकाई हो जसले आपसी बीचमा कडा बन्धन कायम गर्दछ। तिनीहरू एक सफल समकालीन लिभरपूल परिवार कस्तो देखिनु पर्छ भनेर एक परिभाषा हो।
जोन लुन्डस्ट्रम परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
जोन लुन्डस्ट्रम लाइफस्टाइल तथ्यहरू:
आफ्नो शक्तिशाली फुटबल क्यारियरलाई धन्यवाद, लुन्डस्ट्रमले वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि आफ्नै अंश बनाएको छ। अब उसको जीवनशैली चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
जोन लुन्डस्ट्रम एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले लेख्ने समयमा अत्यन्तै थोरै पैसा दिईरहेको छ बरु उसको पेशेवर सपना र लक्ष्यमा केन्द्रित भई। त्यहाँ सामान्य जीवन बिताउनको लागि पर्याप्त पैसा छ जहाँ आफू र उसको परिवारका सदस्यहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता मात्र रहेको छ। एक फुटबलर को रूप मा आफ्नो ठूलो ज्यालाको बावजुद, यो भन्न उचित छ कि जोन Lundstram एक विदेशी जीवनशैली को एक प्रतिरोधक हो - तपाईं तल के देख्न सजिलो गरी सजिलै देखिन्छ।
जोन लुन्डस्ट्रम लाइफस्टाइल तथ्यहरू चिन्न।
जोन लुन्डस्ट्रम अनटोल्ड तथ्यहरू:
लुन्डस्ट्रम नामको बारेमा: १ th औं शताब्दीमा लुन्डस्ट्रम परिवारको नाममा लोहार र किसानहरू बढी थिए। (स्रोत- Ancestry.Co.Uk)।
घटनाहरू जुन त्यो जन्मेको दिन भयोः यो नबिर्सनुहोस् जुन वर्ष लुन्डस्ट्रमको जन्म भएको थियो, ब्राजिलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1994 विश्वकप जित्यो। साथै, दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो अन्तरजातीय राष्ट्रिय चुनाव (अप्रिल 29) आयोजना गर्‍यो जुन उनीहरूको नायक नेल्सन मण्डेलालाई राष्ट्रपति चुनेको देखियो।
1994 मा इबोला भाइरस: वर्ष जोन लुन्डस्ट्रमको जन्म भएको थियो, घातक इबोला भाइरसको नयाँ प्रकोप सुरु भयो, ठीक जायरमा मे9को 1994th मा। यसले कुनै पनि मानव रोगजनक भाइरसको सबैभन्दा बढी मृत्युदर रेकर्ड गर्‍यो जुन आजसम्म मानिसजातिलाई थाहा छ।
1994 मा रुवाण्डा:6अप्रिल 1994 को साँझ (वर्ष लुन्डस्ट्रमको जन्म भएको थियो), रूवाण्डाका राष्ट्रपति जुभनाल हब्यारीमाना र बुरुन्डियाका राष्ट्रपति साइप्रिन नट्यारामिरा, दुबै हुटुलाई लिएर जाँदै गरेको हवाईजहाजलाई रूवाण्डाको किगालीमा अवतरण गर्ने तयारी गर्दा सतह देखि हवामा मिसाइलले गोली हानियो।
वर्षमा 1994, an रुवाण्डामा रुचिमा चलेको बहुमत हुतस र अल्पसंख्यक तुत्सीको बिचमा भएको गृहयुद्धले देशको राष्ट्रपतिको हत्या पछि आधा लाख भन्दा बढी मानिस मारिए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जोन लुन्डस्ट्रम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।